Jeremiah 44 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 Ilizwi elafikayo kuYeremiya ngokusingisele kumaYuda onke ahleliyo ezweni laseYiputa, ahleli eMigidoli, naseTapanesi, naseNofu, nasezweni lasePatrosi, lalisithi:
2 UtshoUtsho uYehova wemikhosi, uThixouThixo kaSirayeli, ukuthi, Nibubonile ububiububi bonke endayizisela bona iYerusalemiYerusalem, nemizi yonke yakwaYuda. Niyabona, ingamanxuwa ngayo le mini, akukho umiyo kuyo;
4 Ndathumela kuni bonke abakhonzi bam abaprofetiabaprofeti, ndibathuma ndivuka kusasa, ndisithi, Musani ukukha niyenze le nto ingamasikizi, ndiyithiyileyo.
6 Baphalazeka ke ubushushuubushushu bam nomsindo wam, watshisa emizini yakwaYuda nasezitratweni zeYerusalem; yaba linxuwa, yabharha, njengoku kunjalo namhla.
7 Kaloku utshoutsho uYehova wemikhosi, uThixouThixo kaSirayeli, ukuthi, Yini na ukuba niyenzele ububiububi obukhulukangaka imiphefumloimiphefumlo yenu, bokunqumla kuni indoda nomfazi, umntwana nosebeleni, kwelakwaYuda, kungasali masalela kuni;
11 Ngako oko utshoutsho uYehova wemikhosi, uThixouThixo kaSirayeli, ukuthi, Yabonani, ubusoubuso bam ndiya kububhekisa kuni, ukuba kube kubi, anqunyulwe onke amaYuda.
12 Ndiya kuwathabatha amasalela akwaYuda, abubhekisileyo ubusoubuso bawo ekuyeni ezweni laseYiputa ukuba aphambukele khona, agqitywe onke; aya kuwa ezweni leYiputa; aya kugqityelwa likrele nayindlala, kuthabathele kwabancinane kuse kwabakhulu; aya kufa likrele nayindlala, abe yintshwabulo, nommangaliso, nentshabhiso, nesingcikivo.
13 Ndiya kubavelela abahleli ezweni leYiputa, njengoko ndayivelelayo iYerusalemiYerusalem ngekrele, nangendlala, nangendyikitya yokufa.
14 Akuyi kubakho usindayo, usalayo, kumasalela akwaYuda, abeze kuphambukela khona ezweni leYiputa, ukuba abuyele ezweni lakwaYuda, elo lizwe ayiphakamisele kulo imiphefumloimiphefumlo yawo ukubuyela kulo, ukuba ahlale khona; ngokuba abayi kubuya, ingengabasinda ngokubhungca.
15 Amphendula uYeremiya onke amadoda, abesazi ukuba abafaziabafazi bawo baqhumisela thixweni bambi, nabafazi bonke ababemi esikhungwini esikhulu, nabantu bonke ababehleli ezweni leYiputa, ePatrosi, ngokuthi,
22 UYehova akaba saba nako ukuthwala, ngenxa yeentlondi zenu ezimbi, ngenxa yamasikizi enawenzayo; lasuka ilizweilizwe lenu labharha, kwaba senkangala, langummangaliso nentshabhiso, lingenammi, njengoko kunjalo namhla.
25 utshoutsho uYehova wemikhosi, uThixouThixo kaSirayeli, ukuthi, Nina nabafazi benu niyathetha ngomlomo wenu, nangezandla zenu nikuzalise, nisithi, Masenze izibhambathiso zethu, esabhambathisa ngazo, zokuqhumisela kukumkanikazi wezulu, simthululele iminikelo ethululwayo:
26 zimiseni nizimise kambe izibhambathiso zenu; zenzeni nizenze kambe izibhambathiso zenu. Ngako oko liveni ilizwi likaYehova, nonke maYuda, ahleliyo ezweni leYiputa: Yabonani, ndifunge igamaigama lam elikhulu, utshoutsho uYehova, inene, aliyi kuba sabizwa igamaigama lam ngumlomo kabani wakwaYuda ezweni lonke leYiputa, esithi, Ihleli nje iNkosi.
29 Nangu ke umqondiso kuni, utshoutsho uYehova, wokuba ndiya kunivelela kule ndawo, ukuze nazi ukuba amazwi am aya kuma, animele ububiububi.
30 UtshoUtsho uYehova ukuthi, Yabonani, ndiyamnikela uFaro-hofra, ukumkani weYiputa, esandleni seentshaba zakhe, esandleni sabafuna umphefumloumphefumlo wakhe, njengoko ndamnikelayo uZedekiya ukumkani wakwaYuda esandleni sikaNebhukadenetsare ukumkani waseBhabheli, utshabautshaba lwakhe, olube lufuna umphefumloumphefumlo wakhe.